Ihe mmalite nke Ghana na-ewepụta ngwa ahịa mpaghara dị ike n'Africa
Ihe mbu nke ndi Ghana bu imeputa Chain Mpaghara Mgbakwunye Mpaghara na Africa
Otu n'ime usoro nke nwere ike ịkwalite Africa bụ nnukwu azụmaahịa azụmaahịa. Ọganihu azụmahịa ngwa ngwa dị mgbe enwere njikọ zuru oke n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ebubata ya, mana karịa nke a, azụmaahịa chọrọ ịnweta isi obodo na-arụ ọrụ.
Agbanyeghị, Plendify a fintech mmalite Na-agbanwe akụkọ a site na idozi isi obodo na-arụ ọrụ maka azụmaahịa dị na kọntinent Africa ma na -emepụta ụdọ ọkọnọ mpaghara siri ike n'Africa.
Plendify B2B Market Market na-enye ndị ọrụ ohere ịchọta ndị na-eweta ngwaahịa, ndị na-ere ahịa na ndị nrụpụta na Ghana.
Emebere Plendify na 2018 na Toronto, Canada site na mmadụ atọ nke Beau Sackey, CEO, (Ghana) Michael Manirakza, COO, (Rwanda) na Roger Vandomme (France) nke nọ na Ivory Coast.
Ndị na-ahụ maka ngalaba nwere ndị nwere mgbakwunye agbakwunyere ego, sayensị data na teknụzụ chọrọ iwulite azụmaahịa na-emetụta ma nwee mmetụta na Africa iji mesịa kwado Mpaghara Azụmaahịa Na-ahụ Maka Afrịka nke Afrịka (AfCFTA)
Na mbu, ahia anyi lekwasiri anya na mgbazinye ego fintech. N'ihi ya, anyị na otu nnukwu ụlọ akụ Ghana rụkọ ọrụ iji wepụta ọkwa anyị ji azụrụ ihe n'aka - PlendScore TM ”
Beau kọwara na Plendify's thesis bụ ma na-abụkarị maka ịkwado azụmahịa.
“Ya mere, mmekọrịta anyị na ụlọ akụ ahụ gbadoro ụkwụ n’inye ego mgbazinye ego na-arụ ọrụ maka obere na azụmaahịa (SMBs) nke ọma, ọsọ ọsọ, yana obere ihe egwu.”
N'okpuru akara ahụ, ndị na-ahụ maka ngalaba ghọtara na mmekọrịta nke ụlọ akụ ahụ nwere njirimara niile nke usoro ire ere ogologo oge, yana maka mmalite, nke a bụ nnukwu ihe egwu.
Nghọta a mere ka mmadụ atọ mee mkpebi banyere ịkwado ụdị azụmaahịa etiti etiti Plendify mmegbu nke ebe ahịa maka SMBs.
Ya mere, Plendify na mgbakwunye na ngwaahịa fintech ya malitere ịmalite ikpo okwu E-commerce B2B n'ahịa na mbubreyo 2019.
Kedu otu Plendify siri gbanwee akụkọ ahịa B2B na Ghana
Dabere na Beau, ahịa B2B na Ghana bụ isi na-anọghị n'ịntanetị ebe enwere ihe karịrị nde 3 SMB na ọnọdụ ahụ, yana azụmaahịa ndị a na-adịghị n'ịntanetị, ihe karịrị ọkara nde bụ ndị na-eweta ngwaahịa.
Ndị na-ebubata ya n'echiche a pụtara ndị na-ere ahịa, ndị na-ekesa, ndị na-emepụta obodo na ndị na-ebubata ngwaahịa.
“Dabere na nyocha sara mbara (ma nyocha nke abụọ na nke abụọ) anyị bịara ghọta na ihe karịrị 90% nke azụmaahịa niile dị na Ghana, n'agbanyeghị agbanyeghị, ha na-etinye ọtụtụ awa n'ịchọ (na-anọghị n'ịntanetị) maka ndị na-ebubata ego, ntụkwasị obi na ntụkwasị obi. Mmetụta dị na nke a bụ igbu oge, ịda ogbenye yana imefu oke ego. ”
Ahịa B2B nke Plendify na-agbanwe akụkọ ya site na ịza ajụjụ ndị akọwapụtara na mbụ.
“Anyị na-eme nke a n'ọtụtụ ụzọ. Firstly, anyị na-eru nso anyị soplaya isi na anyị nọ na ha dị ka ndị na-eweta na anyị n'elu ikpo okwu.
Akụkụ nke usoro anyị na-ebugharị chọrọ obere ndenye na nkwado emere maka iji hụ na anyị na-eweta n'ọma ahịa anyị - azụmaahịa / ndị na-ebubata ya bụ ndị enyocha.
Anyị na-enyekwa ndị na-ebubata anyị ngwa ọrụ dịka ịkwụ ụgwọ na ntanetị na nnyefe mba, nke kachasị mkpa bụ na anyị na-enye ndị na-ebunye anyị ngwaahịa ngwa ahịa sara mbara ma na-enwewanye ọhụhụ. ”
Beau kọwara na ihe Plendify hụrụ na asọmpi asọmpi bụ na ndị na-egwu egwuregwu na oghere na-elekwasị anya na onye na-azụ ahịa ma ọ bụghị na onye na-azụ ahịa.
Plendify ahọrọwokwa ịbụ nke kachasị na ngalaba ndị egwuregwu e-commerce ọdịnala abụghị ndị isi, dịka ọmụmaatụ, nri & ihe ọverageụ Beụ, Mma & Ngosiputa Ngwa, Ọrụ Ugbo & Ọrụ Ugbo ịkpọ aha ole na ole.
"N'ikpeazụ, anyị B2B Ahịa ga-anọgide na-innovate karịsịa site anyị leveraging nke elu keakamere ọgụgụ isi ngwaọrụ, mindset na nkà, na-egosipụta site na anyị mgbe niile rụọ ọrụ ngwaahịa search engine na ngwaahịa nkwanye ike."
Kedu otu Plendify si enye isi obodo
“Atụmatụ anyị iji nye ohere maka isi obodo maka azụmaahịa emezuola site na mmekọrịta anyị na Instlọ Ọrụ Ego.
Ndepụta mmekọrịta a na-eto eto, anyị nwere usoro mmekọrịta siri ike nke mmekọrịta iji nweta ebumnuche ahụ nke ịnye ezigbo ego ngwa ngwa ma kwado ya site na ọrụ dị mma maka ndị ahịa anyị. ”
Beau kwukwara na ebumnuche Plendify bụ iji nye kredit ya n'ahịa yana kredit, ọkachasị ka ọ na-eme ka nghọta data sitere na azụmahịa ha dị n'elu ikpo okwu.
Wayzọ a, Plendify na-enye ọrụ zuru oke nke ọ bụghị naanị ịnye ngwaọrụ na teknụzụ iji nye ndị ahịa ya aka ịba ụba kamakwa na-enyere ha aka inweta ego site na ịnweta kredit na ego iji mee ka uto ha na ijikwa mkpa ego ha.
Banyere PlendScore TM
Beau kọwara na PlendScore TM bụ Plendify's proprietary credit adjudication sọftụwia nke Artificial Intelligence na-akwado ebe ndị azụmaahịa obere na ọkara ga-enweta ego mgbazinye ego na-arụ ọrụ.
“Anyị algọridim mma na onye ọ bụla ego nkwanye. N'otu aka ahụ, anyị nwere ike leverage data na-enweghị njedebe iji mee mkpebi ka mma yana ezigbo oge.
Ihe jikọrọ ya bụ ngwa ọrụ nchọpụta aghụghọ anyị jikọtara iji hụ na PlendScore TM na-ejide ihe niile achọrọ n'aka ndị mmekọ ụlọ ọrụ anyị ma chekwaa pọtụfoliyo ego. "
Plendify's onyinye pụrụ iche
The Plendify otu aghụghọ ngwa mmemme ihu na ihu na mbụ untapped data isi mmalite, na-eke a mmeri-mmeri ọnọdụ.
“N’oge dị mkpirikpi, anyị na-enyere ndị mmekọ ụlọ akụ anyị aka ịnye ndị ahịa ha uru karịa na ogologo oge anyị ga-enweta ọtụtụ ihe ọhụrụ ma nyere ndị mmekọ ụlọ ọrụ ego anyị aka inweta ụzọ iyi ego ọhụrụ.”
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, Plendify lekwasịrị anya n'inye ahụmịhe onye ọrụ na-ahụ maka ndị ahịa, iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ụlọ ọrụ iji ngwa ngwa mezue ngwa ha na ọtụtụ ngwaọrụ, site na ekwentị mkpanaaka na kọmputa.
Na mmechi, Beau kwuru na ebe ọ bụ na ọ na-ebupụta ikpo okwu ahịa ya na nkeji iri na anọ nke 4, Plendify ahụla uto na-eto eto n'ofe niile egosipụtara arụmọrụ.
Dabere na Beau, ikpo okwu ahụ agabigala nbudata ngwa 5000, n'ime ihe na-erughị ọnwa 4.
“Anyị ebilila nwayọ ma nọrọ ugbu a na # 13 na Google PlayStore maka ngalaba ịzụ ahịa na Ghana.
Anyị na-ahụkwa njikọ aka dị elu na ntanetị mgbasa ozi anyị na ntanetị na ntanetị nke na-atọ ụtọ.
Oge ọ bụla site ugbu a, Plendify ga-ahazi ndị zụrụ ihe ma rụọ ọrụ nnyefe mba niile, yabụ a na-atụ anya na ikpo okwu ga-ahụ nnukwu mbido na ọnwa ndị na-abịanụ.
"2021 bụ afọ dị oke mkpa nye anyị ma anyị na-akwadebe ịbanye n'ahịa Naijiria ka anyị lezie anya anyị n'oge na-adịghị anya", Beau kwubiri.
Plendify B2B Ahịa dị na nyiwe niile gụnyere android, Apple, Na web.
Ihe Onyonyo Apụtara: Beau Sackey (N’aka ekpe); Roger Vandomme (Etiti) na Michael Manirakza (Aka nri)